တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ စာဖြေသူများ လိုက်နာရန် စည်းကမ်းချက်များ
၁။ စာဖြေသူများ လိုက်နာရန် စည်းကမ်းချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
(က) စာမေးပွဲဖြေဆိုသူများသည် စာစစ်ဌာနသို့ အချိန်မီရောက်ရှိရမည်။ စာမေးပွဲစသည်မှ နာရီဝက်ကျော်နောက်ကျလာသော မည်သည့် စာဖြေသူကိုမျှ စာမေးပွဲ အခန်းတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခွင့် ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်။
(ခ) စာမေးပွဲဖြေဆိုသူများသည် စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြားကို နေ့စဉ်ယူဆောင်ခဲ့ပြီး စာဖြေသည့် ခုံပေါ်တွင် ကြီးကြပ်ရေးမှူး၊ တွဲဖက်ကြီးကြပ်ရေးမှူးနှင့် လက်ထောက်ကြီးကြပ်ရေးမှူးများ စစ်ဆေး နိုင်ရန် တင်ပြထားရမည်။ မိမိတို့ နောက်ဆုံး ဖြေဆိုရမည့်ဘာသာရပ်ကို ဖြေဆိုပြီး စာမေးပွဲခန်းမှ မထွက်ခွာမီ စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြားကို သက်ဆိုင်ရာ လက်ထောက် ကြီးကြပ် ရေး မှူးထံ မပျက် မကွက် အပ်နှံခဲ့ကြရမည်။
(ဂ) စာမေးပွဲဖြေဆိုသူများသည် မိမိတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ဘောလ်ပင်၊ ခဲတံနှင့် သင်္ချာကိရိယာပစ္စည်းများကို ယူလာခဲ့ကြရမည်။ သင်္ချာကိရိယာများ ယူဆောင်ရာတွင် အခြားဘူးများဖြင့် ယူဆောင် လာခြင်း မပြုရ။ အများအသုံးပြုသည့် ကွန်ပါဘူး ဖြင့်သာ ထည့်ယူရမည်။ ထိုပစ္စည်းများနှင့်အတူ မည်သည့်မှတ်စုမျိုးမှ ပါရှိမလာစေရ။ သံသယရှိဖွယ်ရာ ကွန်ပါဘူးများကို စာမေးပွဲခန်းအတွင်းသို့ ယူဆောင်ခွင့် မပြု။
(ဃ) စာမေးပွဲဖြေဆိုသူများသည် စာမေးပွဲကျင်းပရာ စာမေးပွဲခန်းတွင်းသို့ ကြည့်ရှုရန် (သို့မဟုတ်) အကိုးအကားပြုရန် (သို့မဟုတ်) ကူးယူရန် မည်သည့် အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်း (Smart-Phone/Watch/Ballpers/Glasses,Bluetooth, etc.) စာရွက်စာတမ်း၊ မှတ်စုတိုနှင့် စာအုပ်များကိုမျှ ယူဆောင်ခြင်း မပြုရ။
(င) စာမေးပွဲဖြေဆိုသူများသည် အဖြေလွှာစာအုပ်၏ ပထမစာမျက်နှာ ထိပ်ပိုင်းရှိ ခုံအမှတ်ရေးသားရန် သတ်မှတ်ပေးထားသည့် နေရာတွင် မိမိ၏ ခုံအမှတ်ကို မှန်ကန်ပီသစွာရေးသားရမည်။ အခြား မည်သည့် စာမျက်နှာတွင်မျှ ခုံအမှတ်ရေးခြင်း၊ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း၊ အမည်ရေးသားခြင်းနှင့် အခြားအမှတ်အသားများ ပြုလုပ်ခြင်းတို့ကို မပြုလုပ်ရ။ ပြုလုပ်လျှင် ဖြေဆိုထားသည့် အလွှာကို မသမာမှု ပြုလုပ်ထားသော အဖြေလွှာအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ပယ်ဖျက်မည်။ ခုံအမှတ်နေရာတွင် ဖျက်ရာ ပြင်ရာရှိပါက စာမေးပွဲခန်းစောင့်ကြပ်သည့် လက်လောက်ကြီးကြပ်ရေးမှူး၊
(၂)ဦး မှ သတ်မှတ်ထားသော လက်မှတ်နေရာတွင်သာ ရေးထိုး၍ အမည်များကို ရေးသားစေရမည်။
(စ) စာမေးပွဲဖြေဆိုသူများသည် မိမိ၏ ခုံအမှတ်နှင့် မိမိဆိုသည့်ခုံပေါ်ရှိ ခုံအမှတ်တို့ လွဲမှားခြင်း မရှိစေရန် အထူးဂရုပြု ကြည့်ရှု၍ အဖြေလွှာစာအုပ်ပေါ်တွင်လည်း သတ်မှတ်ထားသော နေရာ၌ မှန်ကန်အောင် ရေးသားရမည်။
(ဆ) စာမေးပွဲဖြေဆိုသူများသည် မိမိနေ့စဉ်လာရောက်ဖြေဆိုကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးရာတွင် ခုံအမှတ်ကိုသာမက အမည်ကိုပါ မှန်၊မမှန် ကြည့်ရှု၍ နေရာမမှားအောင် ဂရုစိုက် လက်မှတ်ရေးထိုးကြရ မည်။ စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့် လက်မှတ်ပေါ်ရှိ စာဖြေသူရေးထိုးထားသည့် လက်မှတ်အတိုင်း ရေးထိုးရန် ဖြစ်ပါသည်။
(ဇ) စာမေးပွဲဖြေဆိုသူများသည် စာမေးပွဲစတင်ချိန်မှ မိနစ်(၃၀)အတွင်း အခင်းကြီးငယ်အတွက် စာမေးပွဲခန်းပြင်ပသို့ ထွက်ခွင့်ပြုမည် မဟုတ်ပါ။
(ဈ) စာမေးပွဲဖြေဆိုသူများသည် မေးခွန်းလွှာနှစ်ဖက်စလုံးတွင် မေးခွန်းအားလုံး ပါမပါကို သေချာစွာ စစ်ဆေးကြည့်၍
ကျောဘက်တွင် မပါခဲ့လျှင်ဖြစ်စေ မေးခွန်းစာလုံးများ မှေးမှိန်ပျက်နေခဲ့လျှင်ဖြစ်စေ၊ မေးခွန်းလွှာ အသစ်တစ်ရွက်ကို လဲလှယ်နိုင်ရန် တောင်းယူရမည်။
READ - ၂၀၁၉ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်​ဝင်​စာ​မေးပွဲ အချိန်​စာရင်း
(ည) စာမေးပွဲဖြေဆိုသူများသည် မိမိတို့ရရှိသော မေးခွန်းလွှာမှာ မိမိတို့ ဆိုရမည့် မေးခွန်း မှန်မမှန် ပထမဦးဆုံးသေချာစွာ ကြည့်ရှု၍ မမှန်လျှင် စာမေးပွဲခန်းစောင့်ကြပ်သူ လက်ထောက်ကြီးကြပ် ရေး မှူးထံ ချက်ချင်းအသိပေးတိုင်ကြားရမည်။
(ဋ) စာမေးပွဲဖြေဆိုသူများသည် အဖြေလွှာစာအုပ်မှ စာမျက်နှာနှစ်ဖက်စလုံးတွင် ရေးသားဖြေဆိုရမည်။ အကြမ်းရေးလို မှတ်လိုလျှင် နောက်ကျောအဖုံး စာရွက်နှင့် အတွင်းစာမျက်နှာများကို လိုသလောက် သုံးနိုင်သည်။ အမြင်အာရုံ မသန်စွမ်းသော ကျောင်းသား/သူများအတွက် မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနမှ စီစဉ်ပေးထားသော အကြမ်းစာရွက်အား လိုသလောက် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဖြေဆိုပြီး ပုစ္ဆာ အဖြေများကို အမှတ်မပေးစေရန်အတွက် ခြစ်ပျက်ခဲ့ပြီးနောက် စာမေးပွဲဖြေဆိုပြီးသည့်အခါမှ စိတ်တစ်မျိုးပြောင်း၍ ဖြစ်စေ၊ နောင်အခါမှ စိတ်တစ်မျိုးပြောင်း၍ဖြစ်စေ ခြစ်ပျက်ခဲ့မိသော အဖြေ ပုစ္ဆာများအားပြန်၍ အမှတ်ပေးရန် စာရေးလျှောက်ထားမှုများကို လုံးဝခွင့်ပြုလက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။
(ဌ) အကြမ်းရေးခြစ်ရန် စာရွက်လွတ်ပေးလိမ့်မည်မဟုတ်။ ထိုသို့ အသုံးပြုရန်လည်း အပြင်မှ စာရွက်လွတ်ကို မယူခဲ့ရ။ ဖြေဆိုလိုသမျှကို ပေးထားသော အဖြေလွှာစာအုပ်တွင်သာလျှင် ရေးရမည်။ အဖြေလွှာစာအုပ်မှ စာရွက်များကို မဆုတ်ရ၊ ထုတ်ပေးထားသော အဖြေလွှာစာအုပ်ကိုသာလျှင် ပြန်လည်ပေးအပ်ရမည်။
အခြားစာအုပ်နှင့် အစားမထိုးရ။ အဖြေလွှာစာအုပ် မလုံလောက်သေးလျှင် အပိုအဖြေလွှာ စာရွက်ထပ်၍ တောင်းနိုင်သည်။ စာမေးပွဲ ဖြေဆိုသူများသည် သတ်မှတ်ထားသော အဖြေလွှာစာအုပ်ဖြင့် ပထမဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းစာအုပ်ဖြင့် မလုံလောက်မှသာ စာမေးပွဲခန်း စောင့်ကြပ်သူ လက်ထောက်ကြီးကြပ်ရေးမှူး ဆရာ၊ ဆရာမများထံမှ အပိုအဖြေလွှာစာရွက်ကို တောင်းယူ၍ ဆက်လက်ဖြေဆိုရမည် ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အပိုအဖြေလွှာစာရွက်၌လည်း သတ်မှတ်ပေးထားသည့်နေရာတွင်သာ ခုံအမှတ်ကို မှန်ကန်စွာရေးသားရမည်။
(ဍ) မေးခွန်းလွှာပေါ်တွင် မည်သည့်အရာမျှ မရေးခြစ်ရ။ စာမေးပွဲဖြေဆိုနေစဉ် ကိုယ်ပေါ်၌လည်းကောင်း၊ မျဉ်းတံပေါ်တွင်လည်းကောင်း၊ ကွန်ပါဘူးတွင်လည်းကောင်း၊ မည်သည့်စာအုပ်၊ ပုံနှိပ်စာရွက်၊ မှတ်စုမျိုးမှ မထားရှိစေရ။ ထားရှိသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့လျှင် စာဖြေသူအား စာမေးပွဲစည်းကမ်းအရ အရေးယူ အပြစ်ပေးခြင်းခံရမည်။ ဂရပ်စာရွက်နှင့် လော့ဂရမ်သမ်ဇယားများကို လိုအပ်သောဘာသာ ဖြေဆိုသောအခါမှသာလျှင် သုံးခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ ဂရပ်စာရွက်နှင့် လော့ဂရမ်သမ် ဇယားစာအုပ်ကို စာမေးပွဲဖြေဆိုသည့်စာစစ်ဌာနက ထုတ်ပေးမည် ဖြစ်သည်။ ဂရပ်စာရွက်ပေါ်တွင် ခုံအမှတ်ရေးသားရန် မလိုပါ။
(ဎ) ဓာတုဗေဒဘာသာရပ်တွင် Chemistry Stencil ကို အသုံးပြု နိုင်သည်။ သို့သော် ၎င်းအပေါ်တွင် မှတ်စုများ ရေးထားခြင်း မရှိကြောင်း၊ စာမေးပွဲကြီးကြပ်သူက စစ်ဆေးကျေနပ်မှသာ ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ ကွန်ပါဘူးအတွက်လည်း ထိုနည်းအတူပင် ဖြစ်သည်။
(ဏ) Chemistry Stencil မှအပ ပလတ်စတစ်တွင် ပုံထွင်းထားသော ပုံသဏ္ဌာန်အမျိုးမျိုးပါရှိသည့် ကတ်ပြားများ၊ မြန်မာပြည်မြေပုံ၊ ကမ္ဘာ့မြေပုံပါရှိသော ကတ်ပြားများစသည်တို့ကို စာမေးပွဲခန်းအတွင်း ယူဆောင်လာခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း မပြုရ။
(တ) မသမာသောနည်းကို အသုံးပြုရန် အထောက်အကူပြုသည့် အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ၊ ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများ၊ လျှပ်စစ်သုံး ကွန်ပျူတာပါရှိသည့် လက်ပတ်နာရီများ၊ သင်္ချာတွက်စက်များ၊ အသံထွက်ကိရိယာများ ပါရှိသည့် လက်ပတ်နာရီများစသည်တို့ကို စာမေးပွဲခန်းအတွင်းသို့ ယူဆောင်လာခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းမပြုရ။
(ထ) ရေဘူး၊ ကွန်ပါဘူးမဟုတ်သည့် အခြားသော စာရေးကိရိယာ ထည့်ထားသည့် ဘူး၊ ဘုရားပုံတော်၊ အင်းကွက်၊ ဘာသာရေးနှင့် သက်ဆိုင်သည့်ပုံများ စာသားများ၊ မီးခြစ်များကို စာမေးပွဲခန်းအတွင်း ယူဆောင်လာခွင့်မပြု။
READ - ဆယ်တန်းအောင်ဖို့ သိထားရမည့် အချက် (၆) ချက်
(ဒ) စာမေးပွဲဖြေဆိုသူများသည် မေးခွန်းပုစ္ဆာများကို ဖြေဆိုရာ၌ ပြဌာန်းသတ်မှတ်ထားသည့် ပုဒ်ရေများအတိုင်း လိုက်နာဖြေဆိုကြရန်နှင့် အကယ်၍ သတ်မှတ်ထားသော ပုဒ်ရေထက်ပို၍ ဖြေဆိုထားခြင်း များရှိပါက ပထမဆုံး ဆို ထားသော အပုဒ်များကိုသာ အစီအစဉ်အတိုင်း သတ်မှတ်ထားသော ပုဒ်ရေအထိသာ စစ်ဆေးအမှတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ပိုပြီး ဖြေထားသော ကျန်အပုဒ်များအတွက် စစ်ဆေး ပေးမည် မဟုတ်ဘဲ ပယ်ဖျက်ပစ်မည် ဖြစ်သည်။
(ဓ) စာမေးပွဲခန်းအတွင်း၌ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ ကွမ်းစားခြင်း၊ မုန့်ပဲသရေစာ စားခြင်း၊ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး တီးတိုးစကားပြောဆိုခြင်းများ မပြုရ။
(န) စာမေးပွဲခန်းအတွင်းသို့ ဘောင်းဘီတို၊ စကတ်အတို၊ စွပ်ကျယ်လက်ပြတ်စသည့် သရုပ်ပျက်ဝတ်စားဆင်ယင်မှု ဖြင့် လာရောက် ဖြေဆိုခွင့်မပြုရ။ ခေါင်းပေါင်း၊ ဦးထုပ်များ ယူဆောင်လာခြင်းမပြုရ။ စာမေးပွဲခန်းတွင်းသို့ အရက်သေစာနှင့် အခြားမူးယစ်ထုံထိုင်းစေသော အရာများ သောက်သုံးပြီး မလာရ။
(ပ) ရှူဆေး၊ ပရုပ်ဆီဘူးများကို စစ်ဆေးခံပြီးမှသာ စာမေးပွဲခန်းအတွင်း ယူခွင့်ပြုမည်။ မသမာမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သံသယရှိပါက ယူခွင့်မပြု။
(ဖ) စာမေးပွဲဖြေဆိုနေစဉ် စာဖြေသူတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး မည်သို့မျှ ဆက်သွယ်ခြင်း မပြုရ။ စာမေးပွဲကြီးကြပ်သူထံမှလည်း မေးခွန်းကို ဖြေဆိုရန်နှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်အကူအညီမျှ မတောင်းရ။ စာဖြေသူတစ်ဦးသည် စာမေးပွဲကျင်းပနေစဉ် အခြားစာဖြေသူတစ်ဦးနှင့် နှုတ်အားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ စာအားဖြင့်ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်ခြင်း ပြုလုပ်ခဲ့လျှင် ထိုသူများအား စာမေးပွဲဆိုင်ရာ စည်းကမ်းအရ အရေးယူ အပြစ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
(ဗ) စာကူးချထားသည်ကို သက်သေအခိုင်အလုံ တွေ့ရှိလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ အဖြေလွှာစာအုပ်ကို စစ်ဆေးစဉ် မသမာမှု တစ်ခုခု ကျူးလွန်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိရလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ဖြေဆိုပြီး သမျှ စာမေးပွဲအဖြေလွှာများကို ပယ်ဖျက်ခြင်း ခံရလိမ့်မည်။ ထို့အပြင် သက်ဆိုင်ရာ စာဖြေသူများအား စာမေးပွဲဆိုင်ရာ စည်းကမ်းအရ အရေးယူ အပြစ်ပေးခံရမည်။ စာမေးပွဲဖြေဆိုရာတွင် အဖြေလွှာ စာအုပ်၌ မိမိဖြေဆိုမည့် မေးခွန်းပုစ္ဆာနံပါတ်ကို မှန်ကန်စွာ ဖော်ပြရမည်။ ပုစ္ဆာနံပါတ် မှန်ကန်စွာ မဖော်ပြခြင်း၊ ပုစ္ဆာနံပါတ် တပ်မထားခြင်းတို့ရှိပါက အဆိုပါ ဖြေဆိုထားသည့် ပုစ္ဆာအတွက် အမှတ် လုံးဝပေးလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
(ဘ) စာအုပ်စာရွက်စာတမ်းများမှဖြစ်စေ၊ အခြားသူတစ်ဦး၏ ဖြေဆိုချက်မှဖြစ်စေ ကူးယူခြင်း၊ အချင်းချင်းတီးတိုးတိုင်ပင် ဆိုခြင်းများ ရှိခဲ့သည်ဟူသော မသင်္ကာဖွယ်ရာ သက်သေ အထောက်အထား များကို စာမေးပွဲဖြေဆိုသူ တစ်ဦးဦး၏။ အဖြေလွှာစာအုပ်တွင် မသမာမှု တစ်ခုခု ကျူးလွန်သည်ဟု အဖြေလွှာစစ်ဆေးစဉ် တွေ့ရှိခဲ့လျှင်လည်း ထိုစာဖြေသူ၏ ဘာသာရပ်အားလုံးအတွက် အဖြေလွှာ စာအုပ်များကို စစ်ဆေးအမှတ်ပေးလိမ့်မည်မဟုတ်။ စစ်ဆေးပြီး အမှတ်များကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်မဟုတ်။ အဖြေလွှာစာအုပ်ရှင် စာမေးပွဲဖြေဆိုသူအား စာမေးပွဲဆိုင်ရာ စည်းကမ်း
(မ) စာမေးပွဲဖြေဆိုသူများကို ဖြေဆိုရန်သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်တစ်ဝက် မကျော်လွန်သေးမီ စာမေးပွဲခန်းမှ ထွက်ခွာသွားခွင့်ပေးလိမ့်မည်မဟုတ်။
(ယ) စာမေးပွဲကြီးကြပ်ရေးမှူးနှင့် လက်ထောက်ကြီးကြပ်ရေးမှူးများ၏ ခွင့်ပြုချက် မရရှိဘဲမည်သည့် စာမေးပွဲဖြေဆိုသူများကိုမဆို စာမေးပွဲအခန်းအတွင်းမှ ထွက်ခွာမသွားရ၊ သတ်မှတ်ထားသော
စာဖြေချိန် တစ်ဝက်ကျော်၍ စာမေးပွဲ ခန်းမှ ထွက်ခွာသွားလိုသောအခါ မေးခွန်းလွှာနှင့် အဖြေလွှာကို စာမေးပွဲခန်း စောင့်ကြပ်သူ လက်ထောက် ကြီးကြပ်ရေးမှူးထံ အပ်နှံခဲ့ပြီးမှ ထွက်ခွာရမည်။ အဖြေလွှာနှင့် မေးခွန်းလွှာကို ပြင်ပသို့ ယူမသွားရ၊ စာမေးပွဲခန်းစောင့်ကြပ်သူ လက်ထောက်ကြီးကြပ်ရေးမှူးအား ပေးအပ်ပြီးမှ ထွက်ခွာသွားရမည်။
(ရ) မိမိတို့အဖြေလွှာများကို စာမေးပွဲဖြေဆိုပြီးနောက် မပျက်မကွက် သေချာစွာ ပြန်လည်ပေးအပ်ကြရမည်။ ထိုသို့ ပေးအပ်ကြောင်းကိုလည်း အဖြေလွှာသိမ်းဆည်းသူထံ၌ လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။
(လ) စာမေးပွဲဖြေဆိုသူများသည် စာမေးပွဲဖြေဆိုပြီးနောက် မိမိတို့၏ အဖြေလွှာစာအုပ်ကို စာမေးပွဲခန်း စောင့်ကြပ်သူလက်ထောက်ကြီးကြပ်ရေးမှူးထံ ပေးအပ်ခြင်းမပြုဘဲ အဖြေလွှာစာအုပ်ကို မိမိဖြေဆိုရသော စာမေးပွဲခန်း ပြင်ပသို့ ယူဆောင်သွားပါက မေ့လျော့ပြီး ယူသွားသည်ဖြစ်စေ သိလျက်နှင့် တမင်ယူသွားသည်ဖြစ်စေ၊ အချိန်ကာလအားဖြင့် မည်မျှပင် တိုတောင်းစေကာမူ ထိုသို့စာမေးပွဲခန်း ပြင်ပသို့ ယူဆောင်သွားခြင်းသည် စာမေးပွဲစည်းကမ်းကို ချိုးဖောက်ရာ ရောက်သဖြင့် စာမေးပွဲစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရ အရေးယူအပြစ်ပေးခြင်း ခံရမည်ဖြစ်သည်။
(ဝ) စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြား၊ အဖြေလွှာစာအုပ်နှင့် မေးခွန်းလွှာစာရွက်စသည့် စာမေးပွဲဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများကို ဆုတ်ဖြဲခြင်းသည် စာမေးပွဲစည်းကမ်းကို ချိုးဖောက်ရာရောက်သဖြင့် စာမေးပွဲစည်းကမ်းအရ အရေးယူ အပြစ်ပေးခြင်း ခံရမည်ဖြစ်သည်။
(သ) အဖြေလွှာစာအုပ်တွင် ဖြေဆိုသော ဘာသာရပ်နှင့် သက်ဆိုင်သော စာမှအပ အခြားမသက်ဆိုင်သော စာသားများ ရေးသားခြင်း မပြုရ။ စာစစ်သူအားသက်ညှာစွာ စစ်ဆေးပေးရန် တောင်းပန်စာ၊ သို့တည်းမဟုတ် ကြောက်လန့်စာများပါရှိပါက ထိုအဖြေလွှာကို ပယ်ဖျက်မည်။
(ဟ) စာသူများသည် စာမေးပွဲဖြေဆိုချိန်မပြီးဆုံးမီ ထွက်ခွာပါက မေးခွန်း လွှာအားလုံးပြင်ပသို့ ယူဆောင်ခွင့်မပြု။ စာမေးပွဲဖြေဆိုချိန် မပြည့်မီ ထွက်ခွာပါက စာမေးပွဲပြီးမှသာ ကြီးကြပ်ရေးမှူးရုံးခန်းတွင် ထုတ်ယူရမည်။
(ဠ) မည်သူမျှ အဖြေလွှာစာအုပ်ကို မိမိသဘောဖြင့် ပြင်ပသို့ ယူဆောင်သွားခြင်း မပြုလုပ်ရ။
(အ) စာဖြေသူများသည် စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြားပေါ်ရှိ အချက်အလက်များအား မိမိသဘောအလျှောက် ပြင်ဆင်ခြင်း၊ မပြုလုပ်ရ။
READ - တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲကြီးမှာ အမှားကင်းစေဖို့ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်များ
2019 matriculation exam rules
2019 matriculation exam time table
2019 matriculation exam notice
တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အဖြေလွှာစစ်ဆေးခ တစ်အုပ်လျှင် အသားတင်ကျပ် ၃၀၀ နှုန်း ထုတ်ပေးမည်
တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့် ကတ်ပြားများတွင် အချက်အလက်မှားယွင်းပါက ဧပြီအထိ ပြင်ဆင်ခွင့်ပြု
၂၀၁၉ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်စာရင်းကို လာမည့်ဇွန်ပထမအပတ် (သို့မဟုတ်) ဒုတိယအပတ်တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာမည်
ဒီနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲကို မသန်စွမ်းစာဖြေသူ ၁၆၀ ကျော် ဝင်ရောက်ဖြေဆို
ဒီနေ့ ဖြေဆိုခဲ့သော မြန်မာစာမေးခွန်း
More in this category: « တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲကြီးမှာ အမှားကင်းစေဖို့ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်များ	စာမေးပွဲခန်းထဲမှာ ကြောက်စိတ်တွေ ကင်းဝေးစေဖို့ »
ကျောင်းသားများ နည်းပညာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘယ် အတိုင်းအတာ သိရှိ တတ်မြောက်သင့်သလဲ???
စာမေးပွဲခန်းထဲမှာ ကြောက်စိတ်တွေ ကင်းဝေးစေဖို့
၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအထောက်အကူပြု အင်္ဂလိပ်စာဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ မေးခွန်းပုံစံ
၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ဓာတုဗေဒဘာသာရပ်မေးခွန်းအတွက် စနစ်တကျ လေ့ကျင့်ဖြေဆိုနည်း